गुल्मीको तम्घासबाट दाङतर्फ – www.janabato.com
गुल्मीको तम्घासबाट दाङतर्फ
२२ मंसिर २०७५, शनिबार ०२:१८ December 8, 2018 जनबाटो मिडिया प्रा.लि.
गाडी अव पाल्पातिर उक्लियो । मैले विचार गरें । यो समयलाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ । अव सुशिललाई हिंजोको दिनभरकोकार्यक्रमको समीक्षा गर्न लागाउनु प¥यो । मैले उहाँलाई एकमुष्ठ प्रश्न राखें उहाँले एक एक गरेर समीक्षा गर्न लाग्नु भयो । उहाँको समीक्षाको सारमा विहानको उद्घाटन सत्र लामो भयो । त्यसलाई छोंटो बनाएर पुस्तकालय दिवस सम्वन्धि कार्यक्रमलाई समय दिएको भए वेश हुने थियो । यस्तो कार्यक्रम अन्य जिल्लामा पनि गर्दा आपसि भेटघाट हुने थियो ।
भाद्र २४ गते विहान ११ बजेतिर प्रगतिशील लेखक संङ्घ नेपाल गुल्मी शाखाको तदर्थ समिति गठन पश्चात खोमा तरामु तम्घासबाट फिर्ता हुने कुरा गर्नु भयो । मेरो मनमा साथै जानपाए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको त थियो तर उहाँको विशेष काम होला मैले किन रोक्नु भन्ने ठानेर उहाँको विदाइलाई मैले सहज रुपमा लिएँ । हिंडने समयमा उहाँलाई खाना ? भनेर प्रश्न गरे उहाँले कतै खाउँला भन्नु भयो । खोमाजी गुल्मी जाने भनेपछि मेरो मनमा पनि उत्साह थपिएको थियो तर त्यही साथीलाई विचबाट छोड्नु पर्ने भयो । मन नलागे पनि उहाँको विदाईलाई स्विकार्नु पर्दथ्यो । खोमाजी विदा भएर हात मिलाएर जाँदा निकै नियाश्रो लाग्यो । मैले प्रकट रुपमा त्यस्तो केही जनाइन । हात मिलाउँदै गर्दा उहाँलाई भने “यताबाट फिर्ता हुँदा बुटवल पुगेपछि म फोनबाट सम्पर्क गरुँला ।” २५गतेका दिन उहाँको कतै विशेष काम हुँदो हो जस्तो लाग्यो । उहाँसंग विदाभए पछि गुल्मीका साहित्यकार माधब ज्ञवालीसंग कार्यक्रम स्थलमा आएका थियौं । भाद्र २४ गते दिनभरको ब्यस्तता आफैमा रमाइलो भयो ।
भाद्र २५गते विहान सबेरै रेसुङ्गा जानका लागि गुल्मीका साथीहरु गाडीको ब्यवस्था गरेको खवर सुनाउनु भएको थियो । उकालो बाटो पार गर्न कठिन हुने लागेर हामी केही जनाले रेसुङ्गाको यात्रा स्थगन गरेका थियौं । रेसुङ्गा गुल्मीको एउटा ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल पनि हो । जहाँ ऋषिले तपस्या गरेको किम्वदन्ती छ । रेसुङ्गा डाँडो उचाइमा रहेपनि अति सुन्दर र हेर्न लायक स्थान भनेर साथीहरुले सुनाउनु भएको थियो । कुरा सुन्दै मनमा नयाँ उर्जा सञ्चार हुने स्थान रहेछ रेसुङ्गा । तर त्यही स्थान हेर्न जानका लागि अनुकुल नपरे जस्तै भयो । जाने साथीहरुलाई हामीले यात्रा शुभ रहोस् भनेर कामन गरेका थियौं ।
भाद्र २५ गते गुल्मीको तम्घासबाट बुटवलतर्फ प्रस्थान गर्नका लागि बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साहित्यकार शुशिल चौधरी र मैले कार्यक्रम स्थलबाट समय निकालेर विहान ५बजेको गाडीको टिकट लिई सकेका थियौं । बुटवलबाट गुल्मी पुग्दा खोमाजी साथमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको स्थानमा आज सुशिल चौधरी रहनु हुने भयो । यो पनि खुशीको कुरा रहने भयो । मलाई साथीको कमी रहेन भन्ने लाग्यो । विहान ४.३० बजे नै सुशिल जीले ढोका बाहिरबाट हामीलाई उठाउनु भयो । यद्यपी हामी दुबैजना उठी सकेका थियौं । समयमा विहानको नित्य कर्म सकेर ठीक पाँच बजे हामी बसपार्क पुग्यौं । बसपार्क पुग्दा बस स्टार्ट भैसको थियो । हामी गएर बस्यौं । बसमा हामी समेत जम्मा संख्या पाँच थियो । हामीलाई शंकालाग्यो यात्रु निकै कम छन भनेर कतै बस नजने त होइन ? डाँक (हुलाक ) लिएर आउने भएकाले बस समयमा बसपार्कबाट अगाडी बढ्यो । झण्डै चालिसको संख्या अटने बस पाँच जना यात्रु लिएर बसपार्कबाट अगाडी बढ्यो । तै पनि मनमा कता चिसो पस्यो अनि सहचालकलाई मैले प्रश्न गरें यात्रु त छैनन कतै बाटोमा गएर लामो समय रुक्ने त हैन ? महामीलाई समयमा बुटवल पुग्नु छ अ्नि त्यहाँबाट पनि अगाडी बढनु छ भने । उनले भने हाम्रो यता त्यस्तो चल्दैन हामी तपाइहरुलाई साढे दशबजे बुटवल उतार्छौ । उनका कुराले हामी ढुक्क भयौं । अव गाडीको वारेमा चिन्ता भएन ।
गाडी रेसुङ्गा डाँडोबाट अगाडी बढ्यो । आज शुशिल चौधरीसंगको यात्रा रमाइलो हुने भयो मैले यही अनुमान गरेको थिएँ । सुशिल चौधरी पाको अनुभवि र मिलनसार ब्यक्ति हुन मैले त्यसैगरी बुझेको थिएँ । रेसुङ्गा पार भए पछि उज्यालो पनि छ्याङ्ङ भयो । सबै गाउँ बस्ती राम्ररी देखिए । हामी अव गुल्मीका गाउँबस्तीमा रमउन लाग्यौं । अनि गुल्मीको समग्र विकासको कुरामा गहिरिन पुग्यौं । यस्तो पहाडमा के कसरी विकास गर्न सकिन्छ ? एकापसमा छलफल चलायौं । पानीको श्रोतको वारेमा चर्चा गर्न लाग्यौं । खेतीयोग्य जमिन र अन्य जमिनको बर्गिकरणको कुरा ग¥यौं । बाटो सहज बनाउने कुरा गर्यौं । जनजीवन सहज बनाउन अपनाउने उपाय जो हाम्रो मनमा थियो त्यो कुरा आलो पालो राख्यौं ।
गुल्मीको समृद्धिको कुरा सकिएको थिएन बलेटक्सार बजारमा गाडी पुगिसकेछ । गाडी रुक्यो । हामी उत्रेर होटलमा चिया पिउन गयौं । गुल्मीको बलेटक्सार त्यो क्षेत्रको ब्यापारी केन्द्र नै रहेछ । विहानैदेखि उपभोक्ताको राम्रो सहभागिता देखियो । हतारमा चिया पिएर हामी बसमा चढ्यौं । बलेटक्सारबाट उत्तर दक्षिणका सबै दृष्य हेर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट हेर्दा अनगिन्ति पहाडहरु देख्न पाइन्छ । त्यहाँबाट गाडी अगाडी बढ्यो हामीले हाम्रो कुराको प्रसङ्ग बदल्यौं । सुशिल जी साहित्यमा प्रवेस गर्नुभयो । दुवैजना साहित्य साधना र साहित्यिक संस्थामा केन्द्रीत भयौ । यात्रा होस् त यस्तो होस् । आज राम्रो संयोग जुरेको महसुस भयो । कहिले उहाँले मलाई प्रश्न राख्नु हुन्थ्यो त कहिले मैले मेरा मनका जिज्ञासा राख्थें । बलेटक्सारसम्म हामीले बाहिरको दृश्य नियालेर गुल्मीको समृद्धिको कुरा गर्न भ्यायौं । त्यो देखियता हाम्रो नजर बाहिर भए पनि ध्यान आपसी गफमामात्र सिमित रहन पुगे ।
हामीले गफलाई विश्राम दिन पाएका थिएनौं रिडी पुगिएछ । रिडी पुगेपछि झल्याँस्स भए जस्तो लाग्यो । गुल्मी जाँदा खोमाजी र म पुगेको होटलको केही कदम अगाडी पुगेर गाडी रुक्यो । हामी तिनैजना ओर्लिएर चिया नास्ता र केही दृष्यावलोकनका लागि अगाडी लाग्यौं । मैले रिडीको पुलको पुल र अगाडीको बजारको फोटो लिएँ । रिडी र गण्डकीको संगम स्थल नजिकमा प्रवेशद्वार निर्माण हुँदै थियो । जहाँ कमल श्रेष्ठ लगायतका सभासदको उपस्थिति देखियो । नविन अधिकारी जी र सुशिल जी अगाडी पुगेर कता फोटो लिने धुनमा हुनुहुन्थ्यो मैले होटलवाला बहिनीलाई प्रश्न गरे आज किन त्यहाँ प्रवेशद्वार बनाइदैछ ? उहाँले आज बाटो उद्घाटनको कार्यक्रम छ त्यसेले भन्नु भयो । उहाँ काममा ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो । त्यो देखि बाहेक अरु गफ गर्ने फुर्सद नै भएन ।
होटलमा चिया बनाउन भनेर हामी बाहिरको फोटा लिनको लागि केही पर पुगेका थियौं । चीय तयार भए पछि मैले उहाँहरुलाई शंकेत दिएँ । हामी छिटो छिटो चिया नास्ताको काम सक्याएर बसतर्फ लाग्यौं । बसतर्फ लाग्दै गर्दा हिजोसाँझको एउटा दृष्य याद आयो । पुस्तकालय दिवसको कार्यक्रम चल्दै गर्दा सूर्यबहादुर सेन ओली मेरो नजिक आएर बाबुको नाम र फोन नम्वर टिपोट गरेर दिनुस् न भन्नु भयो । मै कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दा उहाँ केही पर हुनुहुन्थ्यो । मैले टिप्पणी सक्दासाथ मेरो नजिकमा आएर फोन नम्वर टिपोट गरेर दिन भन्नु भएको थियो । उहाँले मलाई धाप लगाउँदै तपाईंलाई त भाइ भन्न मन लाग्यो रिसानी माफ हुने भए म त भाइ भन्छु भन्नुभयो । मैले भने हो म तपाईको भाइ नै हूँ । दाइ भाइको नाता मलाई अति प्यारो लाग्छ भने । सूर्यबहादुर सेन ओली र म वर्षौ पुरानो नातोदार जस्तै भएर जोडिन पुग्यौं । मैले गुल्मीका मित्रहरुबाट अगाध माया र सद्भाव पाएँ जस्तो लाग्यो । यो पनि एउटा अवसर नै हो । यस्तै स्मरणका साथ म बसमा चढें । शुशिलजी र म एउटै सिटमा थियौ भने नविन अधिकारी (बर्दिया) केही सिट परहुनुहुन्थ्यो । उहाँले हाम्रो कुरा सुन्न सक्नु हुन्थ्यो तर हामी उहाँसंग कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा भने थिएनौं ।
गाडी अव पाल्पातिर उक्लियो । मैले विचार गरें । यो समयलाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ । अव सुशिललाई हिंजोको दिनभरकोकार्यक्रमको समीक्षा गर्न लागाउनु प¥यो । मैले उहाँलाई एकमुष्ठ प्रश्न राखें उहाँले एक एक गरेर समीक्षा गर्न लाग्नु भयो । उहाँको समीक्षाको सारमा विहानको उद्घाटन सत्र लामो भयो । त्यसलाई छोंटो बनाएर पुस्तकालय दिवस सम्वन्धि कार्यक्रमलाई समय दिएको भए वेश हुने थियो । यस्तो कार्यक्रम अन्य जिल्लामा पनि गर्दा आपसि भेटघाट हुने थियो । कार्यक्रम राम्रो भयो । अनि मलाई जिम्मा दिनु भयो । मैले पनि आफ्नो धारणा राख्दै उहाँको समीक्षामा समर्थन जनाएँ । हिंजोको कार्यक्रममको समीक्षाको साथमा अन्य कुरा राख्दा राख्दै हामी वतासेडाँडा पार गरीसकेछौं । केही वन पार गरेर बस तानसेन नजिक पुग्यो । तानसेनबाट निकै यात्रुहरु बसमा चढे अव भरिभराउ भयो । गाडी अगाडी बढेपछि हामी वाह्य वातावरणमा रमाउन लाग्यौं । त्यहाबाट देखिने दृष्यले फेरी एक पटक मन लोभ्यायो । वरतुङबाट ओरालो लागेपछि हामीले हाम्रा कुरालाई विश्रान्ति दियौं । नयाँपाटी पुगेपछि पुनः गफको पुल जोडियो । बस बुटवल बसपार्कमा पुगेर रुक्यो हामी ओर्लीएर बसपार्क भित्र रहेको होटल ताज एण्ड गेष्ट हाउसमा खानाका लागि पुग्यौं । खाना खाएर मुलगेटमा पुग्यौं नेपालगञ्जका लागि गाडी हर्न बजाउँदै रहेछ हामी तीनैजना गाडीमा उक्लीयौं । अव भने भात लागे जस्तै भयो झण्डै दुईघण्टा जति शरीरलाई विश्राम दियौं । सुराईनाका पार भए पछि केही प्रसङ्ग उठाएर गफगाफ भए । भालुवाङ हुँदै बस लमही पुगेर रुक्यो । म दुवैजनासंग विदा भएर दाङ पुग्ने गाडीमा चढें । उहाँहरु दुबैजना पश्चिम तर्फलाग्नु भयो । म समग्र गुल्मीको तिन दिने यात्राको समीक्षा गर्दै दाङ तर्फ लागें ।
← मुर्तिनिलाई अठार करोड (गजल)
जनसत्ताले गर्‍यो भ्रष्टाचारिलाई ‘जनकारबाही’ →
नेपाल मगर संघका केन्द्रीय नेता एवं व्यवसायी बुढा मगरको हत्या, राज्यको असुरक्षाप्रति सर्वत्र विरोध
१४ मंसिर २०७५, शुक्रबार ०४:१७ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on नेपाल मगर संघका केन्द्रीय नेता एवं व्यवसायी बुढा मगरको हत्या, राज्यको असुरक्षाप्रति सर्वत्र विरोध
भ्रष्ट चुडामणीलाई कारवाही गर्दा प्रहरीले गर्यो सर्वसाधारण गिरफ्तार
२३ माघ २०७४, मंगलवार ११:२१ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on भ्रष्ट चुडामणीलाई कारवाही गर्दा प्रहरीले गर्यो सर्वसाधारण गिरफ्तार
नेपालका दलाल पूँजीपति वर्गलाई चिहानमा खरानी पार्नुपर्छ : बास्तोला
९ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०५:३२ जनबाटो मिडिया प्रा.लि. Comments Off on नेपालका दलाल पूँजीपति वर्गलाई चिहानमा खरानी पार्नुपर्छ : बास्तोला